နက္ခတ္တဗေဒ - အင်တာနက်ပေါ်မှမိုးလေဝသ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
နက္ခတ္တဗေဒ ၎င်းသည်တကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့တိုင်းမအံ့သြစေဘဲမနေနိုင်ပါ။ ကြယ်၊ ဂြိုဟ်နှင့်စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသောသိပ္ပံပညာဖြစ်သည်။ ယင်း၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည်“ ကြယ်ငါးပွင့်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားကောငျးကငျခန်ဓာမြားကိုစကွဝuniverseာ၏အဖှဲ့အစညျးနှငျ့၎င်းငျး၏လုပျငနျးမြားကိုဖျောပွလိုသောနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များနှငျ့သိပ္ပံပညာရှင်များကနေ့စဉ်ကမ္ဘာမြေမှတွေ့ရှိကြသည်။
ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်၏တည်နေရာ, ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုသိရန်လေ့လာရေး၏နည်းလမ်းများမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ လေ့လာမှုအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအာရုံစိုက်သည်။
ရှေးအကျဆုံးယဉ်ကျေးမှုများသည်နက္ခတ္တဗေဒကိုဒဏ္myာရီ၊ နတ်ဘုရားများနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားမေးခွန်းများဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒါကရှည်လျားသောခရီးမှကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နည်းပညာနှင့်ဗဟုသုတတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာမြေသည်နောက်ထပ်ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုမဟုတ်ကြောင်းသိကြသည်။ စကြဝာသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပြီးနဂါးငွေ့တန်းများ၊ နေများ၊ ကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များ၊ လများ၊ ဥက္ကာခဲများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊
တယ်လီစကုပ်မှလှူဒါန်းခဲ့သည် လီလီယို ၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒပညာတွင်အသုံးဝင်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့နည်းပညာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူစကြဝuniverseာ၏မူလအစနှင့်ကောင်းကင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအဖြေများပေးနိုင်သည်။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သိပ္ပံသို့အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးတူညီသောလေ့လာရေးနည်းလမ်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သူတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ငံတော်မှဘဏ္financialာရေးအထောက်အပံ့များရရှိကြသည်၊ သူတို့၏စျေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအဆင့်မြင့်ကိရိယာများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တီထွင်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောသုတေသနစင်တာများ၏ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ နာဆာ.
ဤအမျိုးအစားတွင်သင်သည်စကြာ ၀ theာတစ်ခုလုံးနှင့်၎င်း၏မူလအစအကြောင်းများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည်။ ဆိုလာစနစ်၏လည်ပတ်မှုမှသည်ဂြိုလ်အားလုံး၏ဝိသေသလက္ခဏာများအထိအရေးကြီးဆုံးနဂါးငွေ့တန်းများကိုဖြတ်သန်းကာတွင်းနက်များကိုရှောင်ရှားသည်။ နက္ခတ္တဗေဒ၏မှော်ကိုလက်လွတ်။ Spatial အသိပညာနှင့်မပူးပေါင်းပါနှင့်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်ပုံ
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က Event Horizon Telescope (EHT) ၏ သိပ္ပံပညာအသိုက်အဝန်းသည် ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြင့် ကမ္ဘာကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်...
Perseus galaxy အစုအဝေး၏အလယ်ဗဟိုရှိတွင်းနက်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက အသံနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
Stephen Hawking၊ Yuri Milner နှင့် Mark Zuckerberg တို့သည် Breakthrough Starshot ဟုခေါ်သော အစပျိုးမှုအသစ်အတွက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်...
နက္ခတ္တဗေဒ၊ နေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဂြိုလ်တွေအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ပတ်လမ်းကြောင်းအကြောင်း အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် အားလုံးမဟုတ်…
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ရှိသော ဂြိုဟ်တစ်ခုပေါ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး အခြားအရာများဖြင့် ဝန်းရံလျက်...
တယ်လီစကုပ်သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ အသိပညာကို တော်လှန်ခဲ့သော တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးပြီး…
ဘာကြောင့် လရဲ့ တစ်ဖက်ကို အမြဲမြင်နေရတာလဲ။
လသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အမြဲတစေ တူညီသော မျက်နှာကို ပြသည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေမှ ကျွန်ုပ်တို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိကြသည် ...
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင် နေအဖွဲ့အစည်း၏ ရွေ့လျားမှု အမျိုးအစား မြောက်မြားစွာရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက...
နွေဦးညနှင့် နွေရာသီအစောပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ၏မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လေ့လာသူတိုင်း သတိပြုမိကြလိမ့်မည်..။
နေရောင်ခြည် မုန်တိုင်းများသည် အခါအားလျော်စွာ နေပေါ်တွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အချိန်အပိုင်းအခြားနှင့် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပလူတိုဂြိုလ်၏ ပတ်လမ်းကြောင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့် ဆိုလာစနစ်သည် တိုက်ရိုက်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
Big Bang သီအိုရီ